China Tablet Firmware
HTC Fireware များ
Huawei Fireware များ
i Mobile Firmware များ
I phone Jaibreak
I phone Fireware များ
Lenovo Firmware များ
Samsung ဖုန်း Fireware များ
Sony Ericsson ဖုန်း Fireware များ
တရုတ်ဖုန်း Firmware များ
ဖုန်း ဆိုင်ရာ ကွန်ပြူ တာ ဆော့ဝ်
မြန်မာဖောင့် ထည့် နည်း
Mobile House မန်ဘာ များ ကျေးဇူး ပြု ပြီး www.mobilehouse.co.nr မှ တိုက် ရိုက် ၀င်ပေး ပါ ရန် နှင့် အသစ် တင် သမျှ ကို သိရှိ စေရန်
မှာ Like လုပ် ပေး ကြ ပါ ....
Acer root လုပ်နည်း
Alcatel root လုပ်နည်း
Android ဖုန်း root လုပ်နည်း
HTC ဖုန်း root လုပ်နည်း
Huawei ဖုန်း root လုပ်နည်း
i mobile ဖုန်း root လုပ်နည်း များ
Lenovo root လုပ်နည်း
LG ဖုန်း root လုပ်နည်း
Motorola ဖုန်း root လုပ်နည်း
Root Tool များ
Samsung ဖုန်း root လုပ်နည်း
Sony Ericsson ဖုန်း root လုပ် နည်း
ZTE root လုပ်နည်း
Xperia Firmware စုစည်းမှု (latest 2010 to 2014 )
download link from Google Drive
Xperia X8 (Android 2.1) E15i
Xperia X10 (Android 2.3.3) X10i
Xperia X10 Mini (Android 2.1) E10i
Xperia X10 Mini Pro (Android 2.1) U20i
Xperia Play (Android 2.3.4) R800i
Xperia Arc (Android 4.0.4) LT15i
Xperia Arc S (Android 4.0.4) LT18i
Xperia Neo (Android 4.0.4) MT15i
Xperia Neo V (Android 4.0.4) MT11i
Xperia Pro (Android 4.0.4) MK16i
Xperia Ray (Android 4.0.4) ST18i
Xperia Mini (Android 4.0.4) SK15i
Xperia Mini Pro (Android 4.0.4) SK17i
Xperia Active (Android 4.0.4) ST17i
Xperia Live (Android 4.0.4) WT19i
Xperia Neo L (Android 4.0.4) MT25i
Xperia S (Android 4.1.2) LT26i
Xperia SL (Android 4.1.2) LT26ii
Xperia U (Android 4.0.4) ST25i
Xperia Sola (Android 4.0.4) MT27i
Xperia Go (Android 4.1.2) ST27i
Xperia P (Android 4.1.2) LT22i
Xperia ION (Android 4.1.2) LT28h
Xperia Acro S (Android 4.1.2) LT26w
Xperia Tipo (Android 4.0.4) ST21i
Xperia Tipo (Android 4.0.4) ST21i2
Xperia Miro (Android 4.0.4) ST23i
Xperia J (Android 4.1.2) ST26i
Xperia T (Android 4.3) LT30p
Xperia TL (Android 4.3) LT30a
Xperia TX (Android 4.3) LT29i
Xperia V (Android 4.3) LT25i
Xperia E (Android 4.1.1) C1505
Xperia E Dual (Android 4.1.2) C1605
Xperia Z (Android 4.3) C6602
Xperia Z (Android 4.3) C6603
Xperia ZL (Android 4.3) C6502
Xperia ZL (Android 4.3) C6503
Xperia SP (Android 4.3) C5302
Xperia SP (Android 4.3) C5303
Xperia L (Android 4.2.2) C2104
Xperia L (Android 4.2.2) C2105
Xperia Tablet Z WiFi 16GB (Android 4.3) SGP311
Xperia Tablet Z WiFi 32GB (Android 4.3) SGP312
Xperia Tablet Z LTE (Android 4.3) SGP321
Xperia ZR (Android 4.3) C5502
Xperia ZR (Android 4.3) C5503
Xperia M (Android 4.3) C1904
Xperia M (Android 4.3) C1905
Xperia M Dual (Android 4.3) C2004
Xperia M Dual (Android 4.3) C2005
Xperia C (Android 4.2.2) C2305
Xperia Z Ultra (Android 4.4.2) C6802
Xperia Z Ultra (Android 4.4.2) C6833
Xperia Z1 (Android 4.4.2) C6902
Xperia Z1 (Android 4.4.2) C6903
Xperia Z1 Compact (Android 4.4.2) D5502
Xperia E1 (Android 4.3) D2005
Xperia E1 Dual (Android 4.3) D2105
Xperia T2 Ultra (Android 4.3) D5303
Xperia T2 Ultra Dual (Android 4.3) D5322
Xperia Z2 (Android 4.4.2) D6502
Xperia Z2 (Android 4.4.2) D6503
Xperia M2 (Android 4.3) D2303
Xperia M2 Dual (Android 4.3) D2302
Xperia Z2 Tablet WiFi (Android 4.4.2)
Xperia Z2 Tablet LTE (Android 4.4.2) SGP521)
Posted by Ye Yint Aung at 10:04 PM0comments
Labels: Sony Xperia Firmware
ဒီ Post ကို
ဖုန်း ရေ၀င် လျှင် ဘာလုပ် သင့် လဲ ????
သင်္ကြန် ရောက် ခါ နီးပြီ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဖုန်း ရေ ၀င် လျှင် ဘာလုပ် သင့် လဲ ဆို တာလေး ကို Mobile House မှ ပြော ပြပါမယ် ။ ဒီ ပို့ ကို ဖတ် ပြီး ကြိုက် တယ် ကျေးဇူး တင်တယ် ဆို Like ပေး ပါ ။ သူငယ် ချင်း တွေ လဲ သိ အောင် လို့ ရှယ် ပေး ကြ ပါ ။
ရေ ၀င် လျှင် ဘာ လုပ် ရမ လဲ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဂျာနယ် တွေ မှာ အမျိုး မျိုး ရေး ကြ သလို ကိုယ် ထင် သလို ပြော နေ ကြ တာ တွေ လဲ ကြားဖူး နေ ကြ မှာ ပါ ။ အဲ့ ဒါ တွေ မေ့ လိုက် ပါ တော့ ခု ပြော မဲ့ နည်း ကို Mobile House မှ service ကျွမ်းကျင် သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဖုန်းကိုင် တဲ့ သူ တွေ အားလုံး အတွက် အကောင်း ဆုံး နည်း ကိုပြောပြ ပေးပါမယ် ။
အောက်က ပြော တဲ့ အဆင့် တွေ ကို သာ သေချာ လိုက်နာ ပါ က သင့် ဖုန်း ပြန် ကောင်းဖို့ 80% သေချာပါတယ် ။ တကယ် လို့ သာ မလုပ် ခဲ့ ဘူး ဆို ရင် တော့ ပျက် ဖို့ 80% ဖြစ်သွားပါမယ် ။
ဖုန်း ရေ၀င်လျှင် အရင် ဆုံး ချက်ခြင်း ဓာတ်ခဲ ထုတ် ပါ ။ လုံးဝ ပြန် မထည့် ပါ နဲ့ ။
ဘာကြောင့် ဓာတ်ခဲ ထုတ် သင့် လဲ ဆိုတော့ အောက် ကပုံ ကြည့် ပါ ။
ဓာတ် ခဲ ရဲ့ အပေါင်း အနှုတ် ဟာ ရေ နဲ့ ထိ လျှင် လျှပ် ပူး ပြီး သူ့ လမ်းကြောင် ပေါ် က ရှိ တဲ့ အရာ အားလုံး ကို ရှော့ ဖြစ် စေ ပါတယ် ။
၀င်ထားသော ရေ သည် ၁၀ ရက် အထိ မခြောက်နိုင် သော ကြောင့် ဓာတ် ခဲ ပြန် မထည့် သင့် ပါ ဘူး ။
ဂျာနယ် တွေ နဲ့ အချို့ သူ တွေ သိ နေ သော နည်း လမ်း များ မှာ အသုံး မပြု သင့် ပါ ဘူး ။
ဥပမာ- နေပူ လှန်း ခြင်း ၊ hair dryer ဖြင့် အပူ ပေး ခြင်း စတဲ့ နည်း တွေ ပါ ။
ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ power ic , CPU , memory ic နှင့် အခြား ic များ အတွင်း သို့ ၀င် ထား သော ရေ သည် ထို ကဲ့ သို့ နည်း များ နဲ့ မ ခြောက် နိုင်ပါ ။ အောက်ကပုံ ကြည့် ပါ ။
အပူ ပေး ခြင်း ဖြင့် IC အတွင်း ရှိ ရေ သည် ရေငွေ့ ပြန် ပြီး ခဏ နေလျှင် အဲ့ ရေ များသည် နဂို နေ ရာ သို့ ပြန် လည် ရေကျ စေသည့် အတွက် မည်မျှ အပူ ပေး နေစေ IC ထဲ ရှိ ရေ များ သည် ခြောက် မည် မဟုတ်ပါ ။ ထို့ ကြောင့် စတဲ့ အပူ ပေး ပြီး ခြောက် စေတဲ့ နည်း နဲ့ မသုံး သင့် ပါ ဘူး ။
ဖုန်း ရေ ၀င် လျှင် ဘာကြောင့် ပါဝါ ဖွင့် ကြည့် ကြ လဲ ???
လူ တွေ ရဲ့ စိတ်အမျိုး မျိုး ရှိပါတယ် ။ တချို့ က ပိုက်ဆံ ကုန် မှာ ကြောက် လို့ ၊ တချို့ က ကိုယ် တိုင် ကလိ ချင် လို့ ၊ တချို့ က ဂျာနယ် တွေ နဲ့ အချို့ သူ တွေ ရဲ့ ပြော စကား နားယောင် ပြီး လိုက် လုပ် ကြည့် ပြီး ကောင်ပြီထင်ပြီး ဖွင့် ၊ အများစု က တော့ ရေ၀င် ထားတဲ့ ဖုန်းကို ခြောက်လောက်ပါပြီ ပါဝါ လာ မလာ သိချင်လို့ ပြန် ဖွင့် ကြည့် ကြ တာပဲ ။ ဖွင့် ကြည့် ဖို့ ဓာတ်ခဲ ထည့် လိုက် တာ နဲ့ လျှပ် စီး စ၀င် ပါပြီ ။စက် ဖွင့် တာ နဲ့ ic ထဲရှိ ရေ များ ကြောင့် ic တွေ အကုန်ရှော့ ဖြစ် စေ နိုင်ပါတယ် ။ ပါဝါ မပွင့် တော့ မှ ဆိုင် ပို့ ကြ တယ် ။ ပါဝါ ပွင့် တယ် ဘာ မှ မပျက် ဘူး ဆို ရင် ဆက် သုံး ကြ တယ် ။အဲ့ ဒါ မလုပ် သင့် တဲ့ အမှား တွေ ပါ ။
ဘာကြောင့် ဆက်မသုံးသင့် လဲ ???
ရေ တွေ က ဘယ်နည်း နဲ့ ခြောက်ခြောက် ရေညှိ ဆိုတာ တက်ပါတယ် ။ အောက်ကပုံတွေ ကြည့် ပါ ။
အဲ့ ညှိ တက်နေ တာတေ က တဖြည်းဖြည်း စားပြီး သံ ဂျီး ကိုက် ပြီး သက်ဆိုင် ရာ ညှိ တက်နေ တဲ့ နေ ရာ တွေ တဖြည်းဖြည်း ပျက် လာပါတယ် ။ အဲ့ဒါ ကြောင့် ဆက် သုံး လို့ ရပြီး နောက် မှ စပီကာ တို့ မိုက် တို့ LCD တို့ Touch တို့ သုံး မရ တော့ တာ မျိုး IC ထဲ မှာ ညှိ တက်ပါ က လဲ အဲ့ IC ပျက် သွားပါမယ် ။
အောက်ကပုံ ဆို ရေ၀င် ပြီး ၁ပတ် လောက် နေ တဲ့ ပုံပါ ။
အဲ့ ဒါ ဆို ဘာ လုပ် ရ မလဲ ???
ဓာတ်ခဲ ထုတ် ပြီး သာနဲ့ လုံး ၀ ပြန် မထည့် ပါဝါ မဖွင့် ပဲ နဲ့ ဆိုင် ကို သွား ပြ လိုက် ပါ ။ဘာကြောင့် ဆိုင် ပို့ ခိုင်း လဲ ဆို တော့ ဆိုင် မှာ က အကုန် ဖြုတ် ပြီး ရေ၀င် ဖုန်း တွေ ကို ပေါင်း တဲ့ ပေါင်းစက် နဲ့ ပေါင်း ပေးပါတယ် ။ပေါင်း ပေး တဲ့ အတွက် IC ကြား က ရေညှိ တွေ နှင့် ရေ တွေ အကုန် လုံး ထွက် အောင် ညှိ မတက်အောင် ကျွမ်းကျင် သူတွေ ရဲ့ ပညာ၊ အတွေ့ အကြုံ တွေ နဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ပေါင်း ပြီး တော့ ပြုပြင်ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
အောက်က ပုံ တွေ က တော့ ဖုန်းပြင် လျှင် အသုံး များ သော စက်ပစ္စည်း များ
SOLDERING STATION( ခဲ gun )
ပိုက်ဆံ ကုန် မှာ မကြောက် ပါ နဲ့
ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဖုန်းဆိုင် တွေ များလာ တဲ့ အမျှ လက်ခ တွေက လဲ သိပ် မရှိ ပါဘူး ။ဖုန်း ပေါ်မူတည် ပြီး ၄၀၀၀ လောက် ကနေ ၁ သောင်း လောက် ထိ ပဲ ရှိ နိုင်ပါတယ် ။
သင်တို့ စဉ်းစား ကြည့် ပါ ဖုန်းဖြုတ် ခ တပ်ခ ၊ စက်နဲ့ ပေါင်းပေး ခ တကယ် စဉ်းစား ကြည့် ရင် သင်တို့ အတွက် အရမ်း တန်ပါတယ် ။ ၅၀၀၀ လောက် နှမျော ပြီး ဖုန်း ဆက်သုံး လို့ ရသေး လား ဖွင့် ကြည့် လိုက် လို့ ရှော့ ဖြစ် ပြီး ic ပျက် သွား ရင် ic အပို ၀ယ် လို့ ရရင် တောင် ပြန်ခ က ဖုန်းပေါ် မူတည်ပြီး ၁ သောင်းခွဲ က နေ ၁သိန်း ထိ ရှိ ပါတယ် ။ သို့ ပေ မဲ့ ခုနောက် ပိုင်း ဖုန်း တွေ က IC မလာ တာ များ သလို တချို့ IC တွေ ကို ကော်လောင်း ပြီး အသေတပ် ထားတာကြောင့် လဲ လို့ မရနိုင် ပါဘူး ။
ကိုယ် တိုင် ကလိ တဲ့ သူတွေ အနေ နဲ့ ကလဲ ဖြုတ် တဲ့ ချိန် မှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပျက် နိုင် သလို စက် မရှိ တဲ့အတွက် IC အောက် တွေ ထဲ ထိ မဆေးကြော နိုင်ပါဘူး ။ ပါဝါ ပြန်တက် ရင် တောင် IC က နောက်ပိုင်း ကြာလာ ရင် ပျက်သွား မှာ ပါ ။
ပါဝါ မဖွင့် ထားတဲ့ အလုံး ၁၀ လုံး မှာ ၈ လုံး ကောင်း နိုင်ပါတယ် ။100 မှာ 80 ပေါ့ ။
ပါဝါ ဖွင့် လိုက်တဲ့ အလုံး ကတော့ ၁၀ လုံး မှ ၇ လုံး ပျက် နိုင်ပါတယ် ။ ပြင် ရ တာ ရှိ သလို ပြင် မရ တာ လဲ ရှိ ပါတယ် ။တချို့ အလုံး တွေက သုံးရတယ် ဆိုပြီးသုံး နေပေ မယ့် နောက် ပိုင်း သုံး မရ လို့ ပြင်မယ် ဆို မှ ရေညှိ တွေ စားပြီး ပြင်မရတဲ့ အခြေနေ တွေ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။
ဆိုင်ပို့ ခိုင်းတာ က ကျွှန်တော် တို့ အတွက် ဆိုင် တွေ အတွက် မဟုတ် ပါဘူး ။ သင်တို့ မပျက်သင့် ပဲ မပျက် ရ အောင် ပိုက်ဆံ မကုန်သင့် ပဲ မကုန် ရအောင် စေတနာ နဲ့ ဒီ ပိုစ့် ကို ရေး ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ။
Service ကျွမ်းကျင်သော ဆိုင် များ ကို သာမေး မြန်းစုံစမ်း ပြီး ပြ ကြပါ ။ဆိုင်ကြီး တိုင်း နာမည် ကြီး တိုင်း ကောင်းသည် မဟုတ် ပါ ။နောက် တစ် ချက် ကတော့ ဒီဆိုင် မရ နောက် တစ်ဆိုင် ဆို တာ မျိုး မတွေး ပါနဲ့ တစ်ဆိုင် လုပ် ထား ပြီး လျှင် နောက် တစ်ဆိုင် အနေ နဲ့ ပိုမို ခက်ခဲ စေ ပါတယ် ။ထို့ ကြောင့် စိတ်အချ ရဆုံးဆိုင် မှာ သာ အပ် ပါ ။
ကိုယ်တိုင် ကလိ ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပို့ဒ် တစ်ခု သီးသန့် ရေးတင်ပေးပါမယ် ....
ဖုန်းပြုပြင် ရေး နှင့် အရောင်းဆိုင်
ဖုန်းပြုပြင် ရေး နည်း ပညာ သင်တန်း
ဆိုင် လိပ် စာ ကတော့
လမ်း ၃၀ ၊ ၇၃ -၇၄ လမ်းကြား ။ ဆေးကျောင်း ရှေ့ ။မန္တလေး မြို့။
ဖုန်း hardware နှင့် software error များ ကို လျှင် မြန် စွာ ဖြင့် သက်သက်သာသာ ပြုပြင် ပေးလိုက် ရှိပါသည် ။
ဖုန်း – ၀၉၉၁၀၂၂၄၄၃ ၊ ၊ ၀၉၄၉၂၃၉၃၈၄ ။
website – http://www.mobilehouse.co.nr မှာ လဲ ဖုန်း နဲ့ ပတ်သက် သည် များ ကို လေ့ လာနိုင်ပါတယ် ။
ဒီပို့ ကို ကြိုက်ရင် Like , ပြီးရင် သူငယ် ချင်း တွေ သိ အောင် ရှယ် ပေး ကြပါ ။
Posted by Ye Yint Aung at 12:03 PM0comments
ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းပြောဆိုခ အပို ထပ်ပေးမည်
လာမယ့် ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့ကနေ ၂၁ ရက် သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ထုတ်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ငွေဖြည့်ကတ် ကျပ် ၁ သောင်းတန် ၀ယ်ယူသူတွေဟာ အပိုအဖြစ် နောက်ထပ် ငွေကျပ် ၂၀၀၀ ဖိုး ပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းဌာန အင်ဂျင်နီယာ တ ယောက်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကတ်နဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ ရောင်းချခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ၀န်းကျင်အတွင်း ခုလို အပိုဆောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးတာဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်သည်အထိ ထပ်ဆောင်ငွေကို ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ရင် အဲဒီငွေ အလိုအလျောက် ကုန်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသေးစိတ် အစီအစဉ်တွေကိုတော့ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
Posted by Ye Yint Aung at 11:57 AM0comments
Huawei Y535-C00 ကို Root လုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ Myanmar Font
Huawei Y535-C00 ကို Root လုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ Myanmar Font ကို
နေရာအစုံမှာ မြင်ရအောင် သွင်းလို့ရမဲ့ .bat file လေးတစ်ခု ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
တော်တော်ခေါင်းစားခဲ့ရတဲ့ Y535-C00 လေးပါ။
ခုတော့ Developer တစ်ဦးရဲ့ .bat file လေးကြောင့် မြန်မာစာလေး မြင်ခဲ့ရပါပြီ။
ကျတော် Developer name ကိုတော့သေချာ မသိတော့လို့ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို
လုပ်ရတာလဲ မခက်ပါဘူး … Phone ကို Debugging mode on ပြီး PC နဲ့ connect
လုပ်ပေးပြီး .bat file လေး ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူ့ပါသာ အလုပ်လုပ်ပေးသွားပါတယ်။
Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင်တော့ Myanmar Font ရရှိပါပြီ။
Keyboard ပါမလာရင် နှစ်သက်ရာ Keyboard ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Ye Yint Aung at 7:07 AM0comments
Korea Samsung တွေ မြန်မာမှာ သုံးရင် internet မဖွင့်ပဲ ပိုက်ဆံ အလိုလိုစားနေတာကိုဖြေရှင်းဖို့
တချို့ Korea ပြည်တွင်းသုံး Samsung တွေ မြန်မာမှာ သုံးရင် internet မဖွင့်ပဲ ပိုက်ဆံ အလိုလိုစားနေတာကိုဖြေရှင်းဖို့ပါ
Dial pad မှာ 319712358 ကို နှိပ်ပေးပါ
password တောင်းရင် SKT--- 996412 KT----774632 LG U 0821 တစ်ခု
network mode မှာ မြန်မာက network operator ကို ပြောင်းပေးပါ (e.g: MM900 )
credit to all ~
Posted by Ye Yint Aung at 7:04 AM0comments
iOS Style Lockscreen Slidelock မှာ Notifications ဖော်ပြမဲ့ app
iOS Style Lockscreen Slidelock
မှာ Notifications ဖော်ပြမဲ့ app
မိမိ နှစ်သက် တဲ့ app ရဲ့ noti ပဲ ဖော်ပြ စေချင် လဲ ရပါတယ် ။
Posted by Ye Yint Aung at 5:46 PM0comments
Android Tablet Allwiner A13 A10 All Firmware ROM DOWNLOAD
A13_Q8_2127-V4_0309_0912_20120918 - Download - 4shared
Q8-mxc622x-20121101 (1) - Download - 4shared - yagami light
A13 Q88 software 0309-20121108-Q8-V0709 - Download - 4shared
A13_4.2.2_HX_Q8_V5+2cam_nuclear_ococci-eng 4.2.2 JDQ39 20130709 test-keys - Download - 4shared
Q8-mxc622x-20121101 - Download - 4shared
q8-a13_EN_2a068_ssd2532_mma7660_hsd_201207021609 - Download - 4shared
A13_Q8_2127-V4_0309_0912_20120918 (1) - Download - 4shared
AL_Q8_V6.6_4.0-0309_APK_TV_4G_20130808 - Download - 4shared
q8-a13_en_2a068_ssd2532_sigc0308_BMA250_cpt_t800x480_ 20120914 - Download - 4shared
HERO TAB A13 Q8 GSL 1680 ore v2.6 11-01-2013 - Download - 4shared - benjie villafuerte
q8-a13_czy_ssd2532_sigc0308_G-d06_HSD_t8... - Download - 4shared - m ali
Q8_A13_HSD_T800X480_CZY_SSD2532_GC0308_D06-MMA7660-BMA250_RTL8188EUS_20121018 - Download - 4shared - Jason Li
A13_Q8_2127-V4_0309_0912_20120918 - Download - 4shared - Likhit Noon
Q8+pengyang - Download - 4shared - jose rojas
Q8_A13_hsd_T800X480_CZY_SSD2532_GC0329_D06-MMA7660-BMA250_RTL8188EUS_20121018 - Download - 4shared - m ali
Q8-A13 HSD czy_ssd2532_sigc0308_BMA250__t800x480 FR 2012 09.10.1 - Download - 4shared - m ali
q8-a13_en_2a068_ssd2532_sigc0308_BMA250_cpt_t800x480_ 20120914 - Download - 4shared - m ali
Q8_2127-V4_0309_0912_20120918 - Download - 4shared
q8-a13_en_2a068_ssd2532_sigc0308_BMA250_HSD_t800x480_ 20120914 - Download - 4shared - m ali
Q8_A13_CPT_T800X480_CZY_SSD2532_GC0308_D06-MMA7660-BMA250_RTL8188EUS_20121018 - Download - 4shared - m ali
q8_pub_doublecamera_virb_4.0.11_0409 - Download - 4shared
Q8-V4IC-0309-0925 - Download - 4shared - lubo tubo
[DRINHOW] - Firmware Update DSL-500b - bcm-1.1.br.20060205 - IP 10.1.1.1 - admin - Download - 4shared - Luiz Leandro
firmware - Download - 4shared
ibm raid bios firmware update ps_7.12.13_dos_noarch - Download - 4shared
ibm raid bios firmware update disk4_ips_7.12.13_dos_noarch - Download - 4shared
ibm raid bios firmware update disk3 ips_7.12.13_dos_noarch - Download - 4shared
ibm raid bios firmware update disk2 ips_7.12.13_dos_noarch - Download - 4shared
F10B_Firmware_20121128 - Download - 4shared
r819xU_firmware_img - Download - 4shared
Q88_gsl1680_gc2637660 AL-A13Q8 rev8.0 - Download - 4shared
A13+Q88+software+0309-gsl1680..20121108-Q8-V0709 - Download - 4shared
Q88_GSL1688_MC3230_2Cam - Download - 4shared
A13_Q88_4.0_ZY_A13Q8-V1.7_ktf2127_ard10_2cam - Download - 4shared
Q88_A13_SSD2532_DO-XHB_GC0308_AL-A13Q8_RoHS_ - Download - 4shared
q88_gsl1680_gc0308_dmard06_18+ - Download - 4shared
Q88_MID700P+V1.6 - Download - 4shared - SpaceBR Helpdesk
Q88-62250308-1015DOnUTTelecom - Download - 4shared
q88_gsi1680_605248_2cam - Download - 4shared
Q88_A13-PBB-V4.2-Dual-SIV121D-SIV121D-3.1 - Download - 4shared
q88- A13-MID - Download - 4shared - kareem salama
Q88_Flash2camera_TZX-713B_V2.1 - Download - 4shared
Q88_1680_06 - Download - 4shared
Q88_A13_ZY_A13Q8_V1.7_ktf2127_NuNuY_RTO - Download - 4shared
Q88-5_0708V50_1680_06+3230AF_121+0308_4.0.4_20121102C_ THAI_4GB-1748 - Download - 4shared
A13_Q88_2CAMARA_GSL1680_DRA06_0308_RTL8150 - Download - 4shared
Q88 KTF2227P - Download - 4shared - ????? ???????
A13_Q88_AVM-AG075V2+7660+SSD2532QN6+1CAM - Download - 4shared
a088_v3.0_dbl_2g_v1.1.4 - Download - 4shared
A088_slim-m1190-3.1y-20121108.1.0.5-Doucam - Download - 4shared
F8C-m1190-20121119.1.0.5-a088-dou0308 - Download - 4shared - Eko Imron
A088 2camara 3G a10 - Download - 4shared
A088-MID_GSM_2G-M1190_v1.0.3-2.3.4-20120505 - Download - 4shared - Eko Imron
JHZT-A088-Z5-A-M1190-5875y-V1.2-20120710_113830 - Download - 4shared - Dhamma Chitta
F8CS-m1190-20121119.1.0.5-a088-dou0308 - Download - 4shared - Eko Imron
a088_v3.0_dbl_2g_V1.1.4_20121207_r730_40...7'' CAM G08-OK - Download - 4shared - ????? ???????
F8A-m1190-3.1y-20121108.1.0.5-a088-dou0308 (1) - Download - 4shared
Rom A107A088_nandk - Download - 4shared
a088_v3.0_dbl_2g_V1.1.4_20121207_r730_40....img - Download - 4shared - ????? ???????
MASTER-F8A-M1190-3.1Y-20120915.1.0.3-A088-DOU0308 - Download - 4shared
A088 MANBINBOARD V330 2012 08 07 - Download - 4shared - PONGSAK JUYAM
A088_A10_7660 - Download - 4shared
SAMSUNG-2G-4GB-CTP-FT5X-GT811-sichuangb-gsenser7660-LCD1024x600M1190-A088.part1 - Download - 4shared
SAMSUNG-2G-4GB-CTP-FT5X-GT811-sichuangb-gsenser7660-LCD1024x600M1190-A088.part2 - Download - 4shared
wcdma-3.1y-20121108.1.0.5-a088-dou0308_2 - Download - 4shared
a10 2G 0F camara0 A088 - Download - 4shared
F761K-MAINBOARD-V3.0.0 - Download - 4shared
T730-MAINBOARD-V6.2 WIFI+BT - Download - 4shared
t730-mainboard-v6.1 a13 gtide-t730-v1.0 gls1680-rtl8188ctv-kyt-053-v2.0-7660 wifi+bt+sim+2g+2cam bigm_2 - Download - 4shared
F761K-MAINBOARD-V2.0 WIFI+BT+1SIM+2CAM - Download - 4shared
F761G-MAINBOARD-V3.0.0 TW-013 2012 11 28 - Download - 4shared
A10_TW-012_A760G-MAINBOARD-V2.2.0_20120821 - Download - 4shared
SM-710_F761G-MAINBOARD-V3.0.0_TOPWISE-013_20121128_7660_Tango C32_RLT8188CTV - Download - 4shared
T730-mainboard-v3.0_7660_CHIPON-ICN8302M_DY-F-07028-V2 - Download - 4shared
T730-Mainboard v6.3 - Download - 4shared - KO KO
mainboard-toan-tap-lqv77 - Download - 4shared
ForFun Q88D-V1.1 Zet6221 RTL8188 605302 2Cam - Download - 4shared
FORFUN Q88D-V1.2 - Download - 4shared - FERDON VERDE
q88d - Download - 4shared - ????????? ????????????
MGT-X1-ForFun Q88DB V1.1 & Q88D V1.2 zet 6251-4.2.2.img-1.img - Download - 4shared - Ophiwat Jphone
q88d v1.1 - Download - 4shared
FORFUN Q88D-V1.2.part1 - Download - 4shared
FORFUN Q88D-V1.2.part2 - Download - 4shared
FORFUN Q88D-V1.2.part3 - Download - 4shared
FORFUN Q88D-V1.2.part4 - Download - 4shared
Q88D_V1.2 - Download - 4shared
q88d - Download - 4shared
ForFun Q88D-V1.1 Zet6221 RTL8188 605302 2Cam - Download - 4shared - abdulrahim hali
Q88D-NOVA-Nautica2-4G-4.1 - Download - 4shared - Nizam Zakaria
FORFUN Q88D_ 4g.part1 - Download - 4shared
FORFUN Q88D_ 4g.part2 - Download - 4shared
q88d - Download - 4shared - JF Mark Oppus
A13_86VM_M702VM_20130302 - Download - 4shared
A7S_A13_86VW_M705VW_130606_V1.2 - Download - 4shared - thaitablet rom
softwareking universal 4.2.2 a13 firmware - Download - 4shared
Android_A13_MID_a0708 - Download - 4shared
A13_2g_bt_F8GT-m1190-20130225.1.1.9-f761-dou03084G.img - Download - 4shared
a13_android_jaguar_18 - Download - 4shared
a13_2g_7inch_phone_tablet - Download - 4shared - thomas jordon
ROM A13 30725 - Download - 4shared
A807_A13_silend*GSL1680_Gsenser3230AF_Camera_RY589 8BDBD2.img - Download - 4shared
T730_sim a13 byeak2531 - Download - 4shared
AL-A13-751G REV3.0 - Download - 4shared - FERDON VERDE
AL-A13-751G REV3.0 - Download - 4shared
q88-a13-xw711-v16-gsl1680-gt605250-gs0308-2camera-22072013.part3 - Download - 4shared
a13-2g-F761G - Download - 4shared
A13_Q88DB_V1_1_ZET6221_GC0308_RTL8150_EPHONE_F3A - Download - 4shared - nipon soijit
A13_gsl1680_gc605_rtl8188_4_1_1 - Download - 4shared - ????? ???????
A13_gsl1680_gc605_rtl8188_4_1_1.part1 - Download - 4shared
A13_gsl1680_gc605_rtl8188_4_1_1.part2 - Download - 4shared
A13_CM10.1_MID13_v1 - Download - 4shared
Allwiner_A13_4.2.2_MID08S_2013 - Download - 4shared
AL_A13 Q8 - Download - 4shared
A13_4.1.1_by_Sliwa - Download - 4shared
A13_86VE_M707EC.20130403-60 - Download - 4shared
A13-sim-86VE - Download - 4shared - ???????? ???????
EUS sun5i_android_a13-a702-02ban - Download - 4shared
A13_Q83_ktf2127_gc0329_dra010_rlt8188eu - Download - 4shared
a13_Q8_v6.6_OCOCCI - Download - 4shared
sun5i_android_a13-s9060 - Download - 4shared
KTF2127 TS fixer irobot2A13 (TZX-Q8-713B7) - Download - 4shared
a13 ktf2227p - Download - 4shared
a13_small_0201_2013 - Download - 4shared
TAP Q88B ZYQ TAB A13 Q8 GSL 1680 ore V2.6 11-01-2013 - Download - 4shared
A13 ok tested camera not - Download - 4shared
8 A13 Android 4.0.3 - Download - 4shared - Tabtronics Limited
a13-evb-Q8-mxc622x-2012101 - Download - 4shared
Andoy AL-A13-751 REV 2.0 - Download - 4shared - Jayson Gomez
A13_a0708_[TechKnowForum.net] - Download - 4shared
Posted by Ye Yint Aung at 1:51 PM0comments
Labels: China Tablet Firmware
Samsaung Phone တွေ အတွက် Firmware အမြင့်တင်မိသော်လည်ကောင်း အနိုမ့်ဆင်းမိသော်လည်ကောင်း IMEI ပြသနာတွေကို One Click Tool
ဒီတစ်ခေါက် ကတော့ ဟတ်ဝဲ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူး
Samsaung Phone တွေ အတွက် Firmware အမြင့်တင်မိသော်လည်ကောင်း အနိုမ့်ဆင်းမိသော်လည်ကောင်း IMEI ပြသနာတွေကို One Click နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ 
ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးတာ ပါ အဲ့ tool လေးကတော့ Samsaung Remote Client လို့ ခေါ်တဲ့ tool လေးပါ http://www.unlocksamsungonline.com/files/srs-samsung-free-install.exe အဲ့ Tool ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ရှိဖို့ လို ပါတယ်
user name = test
password = srscom
ပြီးရင် connect နိုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ ဖုန်းရဲ့မော်ဒန် အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ Rescan နိုပ်ပါ ပြီးရင် Baseband repair Tool ထဲဝင်ပါ repair method3မျိုး ရှိပါတယ် အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြည့်ပါ တော်ရုံဆိုပြင်လို့ ရပါတယ် အောက်မှာ EFS Store လို့ ရတယ် Restore လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပဲ ကလိကြည့်ပေါ့ ...ကျွန်တော် စမ်းသပ်လို့ အောင်မြင်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ
credit ဟယ်လို သားကြီး ‎ https://www.facebook.com/groups/MyanmarMobileSoftwareDevelope
Posted by Ye Yint Aung at 8:17 AM0comments
Labels: နည်းလမ်း, ဖုန်း ဆိုင်ရာ ကွန်ပြူ တာ ဆော့ဝ်
"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်းထွက်ပြီ
Nga Pain's Thingyan
Android | 2.3 and up | Free
Download - http://bit.ly/thingyan2014 ( PLAY STORE)
http://storage2.evozi.com/apk/dl/14/03/21/com.totalgameplay.ngapaintg.apk?h=HUN8U6l2bINuZ7lFgdzu2Q&t=1395647992 ( download link )
မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သစ်မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်အခါသမယ ကျရောက်ဖို့ အချိန်နီးကပ်လာပါပြီ။ ဒီလိုမင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မြန်မာ နှစ်သစ် မင်္ဂလာ အတွက် ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Total Gameplay Studio က သင်္ကြန်ဂိမ်းလေးတစ်ခုကို မွေးဖွားပေးလိုက်ပါပြီ။ ဂိမ်းလေးရဲ့ နာမည်က Nga Pain's Thingyan (ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်) ဂိမ်းလေးပါ။
ဒီဂိမ်းမထွက်ခင်ကတည်းက အင်တာနက်စာမျက်တွေပေါ်မှာ အတော်လေး ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ဂိမ်းလေးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့က Google Play မှာ တင်ခဲ့ပြီး အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်အနှစ် သာရလေးတွေ ပါအောင် ကြိုးစားဖန်တီးထားတဲ့ ဂိမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းကိုစစချင်း ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Register ပြုလုပ်ဖို့အတွက်
တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ ကစားသူရဲ့ ကစားမှတ်တမ်းများကို စက်ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက် Cloud ပေါ်မှာ Save မှတ်သားရန်အတွက် Register ပြုလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိမိရဲ့ Faebook အကောင့်နဲ့ဝင်ပြီး Register ပြုလုပ်ရမှာပါ။ Faebook အကောင့် မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင်လည်း အသစ်ဖွင့်ပြီး Register လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Register လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဂိမ်းကို စတင်ကစားလို့ ရပါပြီ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ငပိန်ဟာ သင်္ကြန်မှာဆိုက်ကား ထွက်မနင်းရလို့
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သင်္ကြန်မှာရေကစားနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ သင်္ကြန်မှာ ရေဆော့ရင်း ရေကုန်သွားလို့ ငိုနေတဲ့ ကလေး
တွေဆော့တဲ့ မဏ္ဌပ်လေးတစ်ခုကို ရေသယ်ဖို့ အကူအညီတောင်းတာ
ကြောင့် အလုပ်မလုပ်ရမနေနိုင်သော ငပိန်မှာ ရေဒါနပြုဖို့ ကြိုးစား ရတော့တာပေါ့။ ဒီလို ဂိမ်းအစပိုင်း ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်လေးကို ကာတွန်းနှစ်ကွက်တည်းနဲ့ ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ "ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်းမှာ ဘယ်လိုဆော့ကစားမလဲဆိုတဲ့ လမ်းညွှန် ချက်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဂိမ်းစတင်ကစားပြီဆိုရင် သင်္ကြန်မိုးသီချင်း တီးလုံးလေးက အရင်ဆုံးပျံ့လွင့် လာပါတယ်။ ဂိမ်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာ သင်္ကြန်မိုးသီချင်းက နောက်ခံ တီးလုံး
အဖြစ် တင်ဆက်နေမှာပါ။ ဂိမ်းထဲမှာတော့ ငပိန်ဟာ သုံးလမ်းသွား ကတ္တရာလမ်းမှာ ရေဘူးတွေသယ်ပြီး ဆိုက်ကားနင်း ရမှာပါ။ လမ်းပေါ်မှာ
ဆောက်ထားတဲ့ မဏ္ဌပ်အကြီးအသေးတွေ၊ ရပ်ထားတဲ့ ကားအကြီး အသေးတွေ၊ မဏ္ဌပ်ရှေ့မူးပြီးကနေတဲ့ အမူးသမားတွေ၊ လမ်းပေါ်မှာ
ရေပတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ အဖွားအို
တို့ကို ရှောင်ရှားပြီး ဆိုက်ကားနင်းရမှာပါ။ အဲဒီအထဲ တစ်ခုခုကို တိုက်မိသွားပြီဆိုရင် Game Over ဖြစ်ပြီး အစကနေ ပြန်ကစားရပါလိမ့်မယ်။
ဆိုက်ကားနင်းနေစဉ်တစ်လျှောက် စိန်တုံးသဏ္ဍာန်ရေစက်လေးတွေကို လိုက်လံစုဆောင်းပြီး ရေဘားကိုဖြည့်ရမှာပါ။ ရေသန့်ဗူးတွေ၊ ရေပီပါတွေကိုလည်း စုဆောင်းပြီး ရေဘားကိုဖြည့်ကာ ရမှတ်တွေတိုးအောင် လုပ်ရမှာပါ။ ဆိုက်ကားနင်းနေရင် ငပိန်ကို Touch တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့သူတွေကို ရေပတ်နိုင်တဲ့ Function တစ်ခုကို ထည့်ပေးထား ပါသေးတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ မဏ္ဌပ်ရှေ့မူးပြီးကနေတဲ့ အမူးသမားတွေနဲ့
ရေပတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ရေပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေက စိန်တုံးသဏ္ဍာန် ရေစက်လေးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး အဒီရေစက်လေးတွေကို ရယူကာ ရမှတ်တွေ တိုးအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ရမှတ်ကို အခြားဆော့ကစားသူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးကြည့်နိုင်သလို Facebook
ပေါ်မှာလည်း Share နိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ကစားရာမှာ နောက်ခံသီချင်းက အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း ပိတ်လို့ရပါတယ်။ "ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်းလေးကတော့ သင်္ကြန်အနှစ်သာရလေးတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝပါဝင်တဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းလေးဖြစ်ကြောင်း တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။
May Thazin (TSJ Team)
Posted by Ye Yint Aung at 12:34 AM0comments
Apple က iTunes ကို Android Devices တွေမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ် သွားမည်
Apple က iTunes ကို Android Devices တွေမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ် သွားမည်အစီအစဉ်ရှိသည်ဟုသတင်းထွက်ပေါ်
လူအများအကြားနာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Apple က၎င်း၏ iTunes ကို Android Devices တွေမှာပါအသုံးပြုလို့ရ အောင်ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟုသတင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၉ရက်နေ့စစ်တမ်းအရ iTunes ရဲ့ Digital Album တွေ ရဲ့ရောင်းချတဲ့အတိုင်းအတာဟာ ၁၃ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျလာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပြီးယင်းရာခိုင်နှုန်းဟာပြီးခဲ့သည့်နှစ်က နှင့်ယှဉ်ရင် ၁၁ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကွာဟသွားသည်ဟုဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိအချိန်မှာယင်းအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေပြီး Apple ၏အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သူ Steve Jobs ကတော့ယင်းဆန္ဒကို အလိုရှိခဲ့ဖူးသည်ဟုသိရသည်။
လက်ရှိမှာ iTunes Music- Streaming Servies ဟာအသုံးပြုသူကျဆင်း လာခဲ့ပြီးယင်း၏ပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်သည့် Spotify နှင့် Pandora ဟာအပြိုင် တိုးတက် နေပြီး၎င်းတို့ဟာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသဘောတူညီမှုစာချုပ်တွေ ၊ အခွန်ကြေးတွေ ၊ ကြော်ငြာကြေးတွေကနေ တစ်ဆင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။
The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ဟာခန့်မှန်းမှု အရ Music- Streaming Services စနစ်ကိုအသုံးပြုမှု ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၅၁ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာသော်လည်းယင်းစနစ်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီးသုံးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ၂.၁ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျသွားသည် ဟုဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိမှာတော့ အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Apple ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကဖြေကြားခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။
Wai Phyo Aung (TSJ Team)
Ref : HNGN
Posted by Ye Yint Aung at 12:33 AM0comments
Mobile House မှ ကြိုဆို ပါတယ်
ဆက်သွယ်ရန် Site Admin- ရဲရင့်အောင် (yeyintaung777@gmail.com)
Mobile House ကို Android ပေါ် မှာ ကြည့်ဖို့
Mobile House Website
မန်ဘာ ၀င်ရန် Join this site ကို နိုပ် ပြီး Google ကို ရွေးပြီး မိမိ gmail နဲ့ ၀င် ပါ
Labels ( အညွှန်း )
Acer root လုပ်နည်း (4)
Alcatel root လုပ်နည်း (1)
Android Game (62)
Android ဖုန်း root လုပ်နည်း (11)
China Tablet Firmware (2)
Dictionary ( အဘိဓာန် ) များ (12)
HTC Fireware များ (7)
HTC ဖုန်း root လုပ်နည်း (26)
Huawei Fireware များ (112)
Huawei ဖုန်း root လုပ်နည်း (44)
i mobile ဖုန်း root လုပ်နည်း များ (6)
i Mobile Firmware များ (3)
I phone (63)
I phone Jaibreak (13)
I phone Fireware များ (8)
Lenovo Firmware များ (2)
Lenovo root လုပ်နည်း (8)
LG ဖုန်း root လုပ်နည်း (11)
Motorola ဖုန်း root လုပ်နည်း (14)
OPPO ဖုန်း Root လုပ်နည်း များ (2)
Root Tool များ (38)
Samsung ဖုန်း Fireware များ (27)
Samsung ဖုန်း root လုပ်နည်း (52)
SMS massage စုစည်းမှု များ (8)
Sony Ericsson ဖုန်း Fireware များ (11)
Sony Ericsson ဖုန်း root လုပ် နည်း (26)
Sony Xperia Firmware (2)
ZTE root လုပ်နည်း (7)
တရုတ်ဖုန်း Firmware များ (4)
ဖုန်း ဆိုင်ရာ ကွန်ပြူ တာ ဆော့ဝ် (58)
မြန်မာဖောင့် ထည့် နည်း (22)
ဒီ ဆိုဒ် လေးကိုဘယ် လို သဘောရလဲ ?
ရောင်နီဦး ကားလက် မှတ် အရောင်း ဋ္ဌာန
အသွား/အပြန် ရက်ကြို ၊ နေ့ချင်း ကားလက်မှတ် များ ကို ၀ယ်ယူ ရရှိ နိုင်ပါသည် ။ ဖုန်းဆက် မှာ လျှင် အိမ် အရောက် ( အခမဲ့ ) ပို့ပေးပါသည် ။
ဖုန်း > 02 - 77380 , 72483
09 - 91026321 , 400010125 , 2052339
မြို့ တွင်း/နယ်ဝေး ကားအမျိုးမျိုး အဋ္ဌားလို်က် သည် ။
ဒီဆိုဒ် ထဲ ရှိ Firmware တင်ခြင်း နှင့် root လုပ်ခြင်း သည် မိမိ ကျွှမ်းကျင် မှု၊မိမိ နားလည် မှု ပေါ် မူတည် သော ကြောင့် ဖုန်း တစ်ခုခု ဖြစ် လျှင် ပြုလုပ်သူတာဝန် သာဖြစ်သည် ။
ပို့စ် အသစ် တင်တိုင်း ပို့ ပေးရန်
လူကြိုက်များသော post များ
ဖုန်းပျောက် ရင် ဘာလုပ် သင့် လဲ
ဖုန်း ကိုင် တဲ့ လူဦး ရေ အရမ်း များ လာ ပြီ ဆို တော့ ဖုန်း ပျောက် တဲ့ သူတွေ လဲ တော်တော် များ လာပါပြီ ။ တချို့ လဲ အခိုးခံ ရလို့ ၊ တချို့ လဲ မေ...
Android ဖုန်း ကို မြန်မာဖောင့် သွင်းနည်း အစုံ
Root လုပ်ပြီး သားဖုန်း ကို မြန်မာဖောင့် သွင်း မယ် ဆို ဒါလေး တွေ အရင် ဒေါင်းလော့ ဆွဲ ပါ ..... AndExplore Download From Mobile Hou...
Samsung I9300 / I9300T Galaxy S III official Firmwares
Samsung galaxy s3 i9300 အတွက် offic i al firmware စုစည်းတင်ပေး လိုက်ပါတယ် ။ Hotfile က တင် ပေး ထားတာဖြစ် တဲ့ အတွက် အကောင့် မရှိ သူ ဖို့ တေ...
A13_Q8_2127-V4_0309_0912_20120918 - Download - 4shared Q8-mxc622x-20121101 (1) - Download - 4shared - yagami light A13 Q88 softwar...
International FREE Apple ID အသစ် လွယ်ကူစွာ ဖွင့်လှစ်နည်း
မိမိ၏ လက်ရှိ Apple ID ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သုံးလို့ မရသောသူများ၊ ယခုမှ စတင်၍ Apple ID ရယူမည့်သူများ သို့ မဟုတ် နောက်ထပ် Apple ...
Visitor.............. တွေဘယ် စာမျက်နှာတွေကိုကြည့် နေကြသလဲ
Powered byMobile House
မေး မြန်း လိုပါ က yeyintaung777@gmail.com ကို အပ်ပြီးမေး မြန်းနိုင်ပါတယ် ။
Mobile House. Powered by Blogger.